Mankalaza Ny Medaly Volafotsy Azon’i Erick Barrondo Tamin’ny Dia An-tongotra i Goatemala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2012 2:57 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana momba ny Lalao Olaimpika ao Londona 2012.
Mankalaza ny fandresena voalohany azony tamin'ny Lalao Olaimpika fanao rehefa Lohataona tamin'ny Londona 2012 i Goatemala. Ny Sabotsy 4 Aogositra, azon'i Erick Barrondo Garcia ny medaly volafotsy tamin'ny fandehanana an-tongotra 20km ho an'ny Lehilahy. Vao nivoaka ny vaovao, ireo mpampiasa ny media sosialy, isan'izany ireo mpanao politika sy olo-manan-kaja hafa, dia nitehaka sy niarahaba ny fandresena mendrika azon'i Barrondo.
Miarahaba azy amin-kafanam-po ilay Pop-star Ricardo Arjona (@Ricardo_Arjona) [es] :
Ny filoha lefitra, Roxana Baldetti (@roxanabaldetti) [es], dia manoratra ao amin'ny Twitter hoe:
Ilay mpitantara fanatanjahantena, Edgar Galindo (@Galindogt), dia mizara sary iray ahitàna ity atleta miavaka ity eny ambony lampihazo, vonona handray ny medaliny. Toy ny mbola manonofy noho ny fandreseny i Barrondo .
Erick Barrondo dia teraka tany Aldea Chuyuc, any amin'ny kaominin'i San Cristóbal Verapaz, iray amin'ireo faritra tena mahantra indrindra ao amin'ny firenena izay tena mizaka manokana ny vokatry ny adin'ny zava-mahadomelina. Nambara fa ny tanànany sy ny firenena manontolo dia samy niomana ho amin'ilay fankalazana.
@opinaelbalon [es]: Erick Barrondo: “Fa mbola hirehareha fatratra aho raha toa ny olona hanary ny fitaovam-piadiany ka hanakalo izany aminà kiraro ‘sneakers’ mba handehanana eny amin'ny toerana fanaovna fanatanjahantena sy hanao fanazaran-tena”